Bajongise phesheya - HeraldLIVE
The Algoa Sun Bajongise phesheya January 25, 2014
BAZAKUNYUSA inqanaba lesizwe ngethuba bentinga besiya kukhuphiswano lomdaniso olubizwa World Dance Council e-Paris ngalenyanga sikuyo.
Ababini base-NU2 u-Maqocwa Cuba, ominyaka elishumi elinesithathu, kunye no-Amile Sikepe, ominyaka elishumi elinambini, abadanisela i-Ndoni Dance Art Academy, banemincili luhambo oluzayo.
“Ndonwabe kakhulu nangoku andikayikholelwa ukuba ndizakuya phesheya, ingathi iseliphupha yonke lento,”utshilo u-Cuba.
Le-Academy isekwe nguThembinkosi Ndoni ngo-2002. Ngelothuba, yayinamalungu amashumi amabini anesihlanu. Kungoku nje le-Dance Academy inamalungu amashumi amane anesibini.
“Ndiyavuya kakhulu sithe safumana ithuba lokuhamba siye e-Paris, ndigcwele yimincili nje ngokuba olukhuphiswano laqalwa ngo-1920.
“Kuyaqala ukuba kho abantwana abamnyama abasuka eMzantsi Afrika baya kumela ilizwe.Sizakube sikhuphisana nabadanisi abamashumi amabini anesibini,”utshilo u-Ndoni.
Olukhuphiswano luzabanjelwa e-Paris luzakuxabisa amawaka amashumi amahlanu erandi. Abadanisi inkxaso bayifumene kusodolophu.
Kodwa ibali lwesisibini aliphelelanga apho. Ababadanisi basadinga inkxaso kuba bazakubhekisa e-Blackpool eNgilane kunyaka ozayo. Badinga amawaka angamashumi amane anesihlanu erandi.
“Ngomhla we-22 ka-October sizabe sine gala dinner apha e-City Hall sizama ukwenza mali eyaneleyo.
“Kwaye sicela nabanina onakho usinceda enze njalo kwisebe lebhanka i-Nedbank, phantsi ko-Ndoni Dance Art Academy, inombolo ye-account ithi 1046994354, i-branch code ithi 12122009.
“Sicela okwaziyo nonomnqweno wokusinceda, asixhase,”utshilo umdanisi onemincili u-Ndoni.
Teaching others what karate has taught her
School project instills pride